အလုပ်တွင်ကျယ်စေဖို့ ရှောင်ရန် ၅ ချက် – Gentleman Magazine
အလုပ်တွင်ကျယ်စေဖို့ ရှောင်ရန် ၅ ချက်
လူတိုင်း ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် အလုပ်များများနဲ့ မြန်မြန်ပြီးအောင် လုပ်ချင်တဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ကို အောင်မြင်မှုမရအောင် ဆွဲထားတဲ့အရာတွေက ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ သတိမပြုမိတတ်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အရင်တုန်းက လိုအပ်တဲ့ အကျင့်တွေ ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ကို လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့ အချက် ငါးခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. မနက်စာ မစားခြင်း
လူတော်တော်များများဟာ အဲဒိအကျင့်ကို မဖျောက်နိုင်တတ်ကြပါဘူး။ အိပ်ရာဝင်နောက်ကျတဲ့သူတွေဟာ အိပ်ရာထနောက်ကျတတ်ကြတယ်။ အဲဒိမှာ မနက်စာစားဖို့ အချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ ၈ နာရီလောက် အာဟာရနဲ့ ဝေးပြီးရင် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အစာကို လိုအပ်ပါတယ်။ မနက်စာ မစားခဲ့ရင်တော့ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ စိတ်ညစ်စရာနေ့တစ်နေ့ကို အစပြုလိုက်မိပါပြီ။
မနက်စာအတွက် ညတည်းက နည်းနည်းပါးပါး ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါ။ မနက်စာအတွက် အသားညှပ်ပေါင်မုန့် တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် သစ်သီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သောက်သုံးလိုက်ပါ။
၂. အီးမေးလ် ခဏခဏ စစ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ မနက်နိုးနိုးခြင်းမှာ ဖုန်းကို ထုတ်ကြည့်မိတတ်ကြပါတယ်။ အိပ်နေတုန်း ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို လွတ်မသွားချင်ကြပါဘူး။ အဲဒိအလေ့အကျင့်ဟာ မကောင်းတဲ့ ပြင်သင့်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ခင်းတွေကို ဖုန်းကြည့်ရင်း စလိုက်ရင် သူများတွေရဲ့ အပူတွေ ကူးစက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဟာ တစ်နေ့တာလုံး အလုပ်မတွင်ကျယ်စေပါဘူး။ ဖုန်းကို ယူပြီး ကြည့်ချင်စိတ်ကပဲ ကြီးစိုးနေပါလိမ့်မယ်။
အဲဒိအကျင့်ကို ဖျောက်ဖို့အတွက် နေ့တစ်နေ့ကို သင့်ရဲ့ အလုပ်ရည်မှန်းချက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် ရည်မှန်းချက်တွေကို တွေးတောရင်း အစပြုလိုက်ပါ။ ဒီနေ့ ဘာလုပ်ပြီးချင်လဲ ဆိုတာ စဉ်းစားလိုက်ပါ။ အလုပ်ပြီးသွားပြီလို့ အာရုံပြုလိုက်ပါ။ ဦးစားပေးအလုပ်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းကိုစစ်ဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ထားလိုက်ပါ။ အဲဒိအချိန်တွေမှာပဲ ဖုန်းကို ထုတ်စစ်မိအောင် ကြိုးစားပါ။
၃. တစ်နေ့စာ အစီအစဉ်မဆွဲခြင်း၊ တစ်နေ့တာ အလုပ်ကို ပြန်မသုံးသပ်ခြင်း
လူတော်တော်များများဟာ နေ့တစ်နေ့အတွက် အစီအစဉ်မရှိပဲ ဒီတိုင်း စတတ်ကြပါတယ်။ တွေ့ရာအလုပ်တွေကို လုပ်တတ်ကြတယ်။ ဦးစားပေးအလုပ်တွေကို သီးသန့်ခွဲထားတာ မရှိပါဘူး။ အဲဒါက အလုပ်တွင်ကျယ်ဖို့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
တစ်နေ့လုံး အလုပ်ရှုပ်နေပြီးတော့ ဘာတစ်ခုမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မပြီးဘူးဆိုတာ အဲဒိအကျင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တန်းမလုပ်ပဲနဲ့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်ဟာနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ခဏလောက် သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဦးစားပေးအလုပ်တွေကို အဓိကထားပြီး အချိန်ဇယားတစ်ခု ဆွဲလိုက်ပါ။ အသေးစားအလုပ်လေးတွေကိုတော့ လွတ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြည့်လိုက်ပါ။ အဓိကဦးစားပေး အလုပ်တွေကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်မယ့် အချိန်မှာ ထားပါ။ အလုပ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားရင် တစ်နေ့စာအလုပ်တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ နောက်တစ်နေ့အတွက် အစီအစဉ် ကြိုချဖို့ ငါးမိနစ်လောက် အချိန်ပေးပါ။
၄. ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် များများသောက်ခြင်း၊ ရေမသောက်ခြင်း
လူတော်တော်များများဟာ အိပ်ငိုက်မှာစိုးတာကြောင့် ကော်ဖီကို တစ်နေ့လုံးလိုလို သောက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မနက်စောစောမှာ ရေဓာတ်ကင်းမဲ့နေလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး ရေအစား ကော်ဖီကို သောက်သုံးတဲ့အခါ ပြသနာ ပိုဆိုးသွားပါတယ်။ အစာခြေစနစ်ကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ မနက်စောစောမှာ ကော်ဖီသောက်တဲ့အခါ ကော်ဖီရဲ့ အကောင်းဆုံး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မခံစားရတော့ပါဘူး။ မနက်စောစောမှာ ရေပဲ သောက်ပါ။ နေ့လည်နေ့ခင်း ကော်ဖီသောက်ရင်လဲ ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ပြီးတိုင်း ရေများများသောက်ပေးပါ။
၅. သဘောထားကို တစ်ခုထဲ မထားတတ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ဟာ နေ့တစ်နေ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တူတူ ကျွန်တော်တို့ သဘောထားတွေကို ပြောင်းလဲပစ်တတ်ကြပါတယ်။ သဘောထားကို မထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ ကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာပဲ စိတ်ကြည်လင်ပြီးတော့ မကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာ စိတ်ညစ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်မှာ အဲဒီအကျင့်ရှိနေပါပြီ။ အဲဒါကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် အိပ်ရာမထခင်ကတည်းက ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့လုံးစာသဘောထားကို သတ်မှတ်ထားကြည့်ပါ။ ပျော်ရွှင်ပြီး အလုပ်တွင်ကျယ်တဲ့ နေ့လေးဖြစ်မယ်လို့ အာရုံပြုကြည့်ပါ။ အလုပ်တွေ ထင်ထားတာထက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြီးသွားတာကို ကြိုပြီးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အဲဒိ မနက်ပိုင်းအလေ့အကျင့်လေးဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာ အများကြီး အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နေ့တွေကို ယူဆောင်လာပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ဖို့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ ကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေနဲ့ အစားထိုးဖို့ပါ။ အပေါ်က အကျင့်ငါးခု ကိုယ့်မှာရှိနေလား ကြည့်ပါ။ အကျင့်တစ်ခုခြင်းစီ ဖျောက်ကြည့်ပါ။
အကျင့်ကောင်းတစ်ခုရပြီဆိုတာနဲ့ နေ့တိုင်းစွဲလုပ်မိအောင် ကြိုးစားပါ။ အလုပ်တွင်ကျယ်ပုံကတော့ ကိုယ့်ဘာသာတောင် အံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်။
အလုပျတှငျကယျြစဖေို့ ရှောငျရနျ ၅ ခကျြ
လူတိုငျး ဘယျသူဖွဈဖွဈ အလုပျမြားမြားနဲ့ မွနျမွနျပွီးအောငျ လုပျခငျြတဲ့သူတှခေညျြးပါပဲ။ တဈခါတဈလမှော ကြှနျတျောတို့ကို အောငျမွငျမှုမရအောငျ ဆှဲထားတဲ့အရာတှကေ ကြှနျတျောတို့ လုံးဝ သတိမပွုမိတတျတဲ့အရာတှေ ဖွဈနတေတျတယျ။ အရငျတုနျးက လိုအပျတဲ့ အကငျြ့တှေ ဖွဈနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ ကြှနျတျောတို့ကို လုပျငနျးနှောငျ့နှေးစနေိုငျတဲ့ အခကျြ ငါးခုကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁. မနကျစာ မစားခွငျး
လူတျောတျောမြားမြားဟာ အဲဒိအကငျြ့ကို မဖြောကျနိုငျတတျကွပါဘူး။ အိပျရာဝငျနောကျကတြဲ့သူတှဟော အိပျရာထနောကျကတြတျကွတယျ။ အဲဒိမှာ မနကျစာစားဖို့ အခြိနျမရှိတော့ပါဘူး။ ၈ နာရီလောကျ အာဟာရနဲ့ ဝေးပွီးရငျ ခန်ဓာကိုယျဟာ အစာကို လိုအပျပါတယျ။ မနကျစာ မစားခဲ့ရငျတော့ အလုပျမဖွဈတဲ့ စိတျညဈစရာနတေ့ဈနကေို့ အစပွုလိုကျမိပါပွီ။
မနကျစာအတှကျ ညတညျးက နညျးနညျးပါးပါး ပွငျဆငျထားခဲ့ပါ။ မနကျစာအတှကျ အသားညှပျပေါငျမုနျ့ တဈခုပဲဖွဈဖွဈ သဈသီးဖြျောရညျတဈခှကျပဲဖွဈဖွဈ သောကျသုံးလိုကျပါ။
၂. အီးမေးလျ ခဏခဏ စဈခွငျး
ကြှနျတျောတို့ မနကျနိုးနိုးခွငျးမှာ ဖုနျးကို ထုတျကွညျ့မိတတျကွပါတယျ။ အိပျနတေုနျး ဖွဈခဲ့တာတှကေို လှတျမသှားခငျြကွပါဘူး။ အဲဒိအလအေ့ကငျြ့ဟာ မကောငျးတဲ့ ပွငျသငျ့တဲ့ အကငျြ့တဈခုဖွဈပါတယျ။ မနကျခငျးတှကေို ဖုနျးကွညျ့ရငျး စလိုကျရငျ သူမြားတှရေဲ့ အပူတှေ ကူးစကျလာပါလိမျ့မယျ။ အဲဒါဟာ တဈနတေ့ာလုံး အလုပျမတှငျကယျြစပေါဘူး။ ဖုနျးကို ယူပွီး ကွညျ့ခငျြစိတျကပဲ ကွီးစိုးနပေါလိမျ့မယျ။
အဲဒိအကငျြ့ကို ဖြောကျဖို့အတှကျ နတေ့ဈနကေို့ သငျ့ရဲ့ အလုပျရညျမှနျးခကျြနဲ့ ကိုယျပိုငျ ရညျမှနျးခကျြတှကေို တှေးတောရငျး အစပွုလိုကျပါ။ ဒီနေ့ ဘာလုပျပွီးခငျြလဲ ဆိုတာ စဉျးစားလိုကျပါ။ အလုပျပွီးသှားပွီလို့ အာရုံပွုလိုကျပါ။ ဦးစားပေးအလုပျတှကေို ကိုယျ့ဘာသာ သတျမှတျလိုကျပါ။ ဖုနျးကိုစဈဖို့ အခြိနျသတျမှတျထားလိုကျပါ။ အဲဒိအခြိနျတှမှောပဲ ဖုနျးကို ထုတျစဈမိအောငျ ကွိုးစားပါ။
၃. တဈနစေ့ာ အစီအစဉျမဆှဲခွငျး၊ တဈနတေ့ာ အလုပျကို ပွနျမသုံးသပျခွငျး
လူတျောတျောမြားမြားဟာ နတေ့ဈနအေ့တှကျ အစီအစဉျမရှိပဲ ဒီတိုငျး စတတျကွပါတယျ။ တှရေ့ာအလုပျတှကေို လုပျတတျကွတယျ။ ဦးစားပေးအလုပျတှကေို သီးသနျ့ခှဲထားတာ မရှိပါဘူး။ အဲဒါက အလုပျတှငျကယျြဖို့ကို အနှောငျ့အယှကျဖွဈစပေါတယျ။
တဈနလေုံ့း အလုပျရှုပျနပွေီးတော့ ဘာတဈခုမှ ဖွဈဖွဈမွောကျမွောကျမပွီးဘူးဆိုတာ အဲဒိအကငျြ့ကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ အလုပျတနျးမလုပျပဲနဲ့ ကိုယျလုပျရမယျ့ဟာနဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှကေို ခဏလောကျ သုံးသပျကွညျ့ပါ။ ဦးစားပေးအလုပျတှကေို အဓိကထားပွီး အခြိနျဇယားတဈခု ဆှဲလိုကျပါ။ အသေးစားအလုပျလေးတှကေိုတော့ လှတျနတေဲ့ နရောတှမှော ဖွညျ့လိုကျပါ။ အဓိကဦးစားပေး အလုပျတှကေို အာရုံစူးစိုကျနိုငျမယျ့ အခြိနျမှာ ထားပါ။ အလုပျအားလုံးပွီးဆုံးသှားရငျ တဈနစေ့ာအလုပျတှကေို ပွနျလညျသုံးသပျဖို့နဲ့ နောကျတဈနအေ့တှကျ အစီအစဉျ ကွိုခဖြို့ ငါးမိနဈလောကျ အခြိနျပေးပါ။
၄. ကျောဖီ၊ လကျဖကျရညျ မြားမြားသောကျခွငျး၊ ရမေသောကျခွငျး
လူတျောတျောမြားမြားဟာ အိပျငိုကျမှာစိုးတာကွောငျ့ ကျောဖီကို တဈနလေုံ့းလိုလို သောကျသုံးလရှေိ့ပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျဟာ မနကျစောစောမှာ ရဓောတျကငျးမဲ့နလေရှေိ့ပါတယျ။ တဈနလေုံ့း ရအေစား ကျောဖီကို သောကျသုံးတဲ့အခါ ပွသနာ ပိုဆိုးသှားပါတယျ။ အစာခွစေနဈကိုလညျး ထိခိုကျစပေါတယျ။ မနကျစောစောမှာ ကျောဖီသောကျတဲ့အခါ ကျောဖီရဲ့ အကောငျးဆုံး အကြိုးကြေးဇူးတှကေို မခံစားရတော့ပါဘူး။ မနကျစောစောမှာ ရပေဲ သောကျပါ။ နလေ့ညျနခေ့ငျး ကျောဖီသောကျရငျလဲ ကျောဖီတဈခှကျသောကျပွီးတိုငျး ရမြေားမြားသောကျပေးပါ။
၅. သဘောထားကို တဈခုထဲ မထားတတျခွငျး
ကြှနျတျောတို့ဟာ နတေ့ဈနရေဲ့အဖွဈအပကျြတှနေဲ့တူတူ ကြှနျတျောတို့ သဘောထားတှကေို ပွောငျးလဲပဈတတျကွပါတယျ။ သဘောထားကို မထိနျးခြုပျနိုငျကွပါဘူး။ ကောငျးတဲ့နတှေ့မှောပဲ စိတျကွညျလငျပွီးတော့ မကောငျးတဲ့နတှေ့မှော စိတျညဈနမေယျဆိုရငျ သငျ့မှာ အဲဒိအကငျြ့ရှိနပေါပွီ။ အဲဒါကို တိုကျခိုကျဖို့အတှကျ အိပျရာမထခငျကတညျးက ကိုယျ့ရဲ့တဈနလေုံ့းစာသဘောထားကို သတျမှတျထားကွညျ့ပါ။ ပြျောရှငျပွီး အလုပျတှငျကယျြတဲ့ နလေ့ေးဖွဈမယျလို့ အာရုံပွုကွညျ့ပါ။ အလုပျတှေ ထငျထားတာထကျ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျပွီးသှားတာကို ကွိုပွီးမွငျယောငျကွညျ့ပါ။ အဲဒိ မနကျပိုငျးအလအေ့ကငျြ့လေးဟာ သငျ့ရဲ့ စိတျနသေဘောထားပျေါမှာ အမြားကွီး အကြိုးသကျရောကျစနေိုငျပါတယျ။
မကောငျးတဲ့ အလအေ့ကငျြ့တှဟော ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့နတှေ့ကေို ယူဆောငျလာပါတယျ။ မကောငျးတဲ့အကငျြ့ကိုဖြောကျဖို့ တဈခုတညျးသောနညျးလမျးကတော့ ကောငျးတဲ့ အလအေ့ကငျြ့တှနေဲ့ အစားထိုးဖို့ပါ။ အပျေါက အကငျြ့ငါးခု ကိုယျ့မှာရှိနလေား ကွညျ့ပါ။ အကငျြ့တဈခုခွငျးစီ ဖြောကျကွညျ့ပါ။
အကငျြ့ကောငျးတဈခုရပွီဆိုတာနဲ့ နတေို့ငျးစှဲလုပျမိအောငျ ကွိုးစားပါ။ အလုပျတှငျကယျြပုံကတော့ ကိုယျ့ဘာသာတောငျ အံ့ဩသှားပါလိမျ့မယျ။
Previous: အလုပ်ပိုမိုပြီးမြောက်စေဖို့ လွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် နည်းလမ်း(၃)ခု
Next: သူမဆီကနေ သင် သိုဝှက်ထားလို့ မရတဲ့အရာများ